Cunnooyinka Alkalka - Sida Loola Socdo Si Miisaanku U Dhaco IT SHAQEEYA | Cuntada Nutri
Sergio Gallego | | Alimentos, Cuntada
Maanta waxaa jira cuntooyin badan oo lagu dhimo miisaanka, qaarkood ma ahan kuwo caafimaad qaba oo gebi ahaanba waxyeello u leh caafimaadka iyo kuwa kale oo liddi ku ah kaa caawinaya inaad lumiso miisaanka hab wax ku ool ah oo caafimaad leh. Markan waxaan kaala hadlayaa cuntada alkaliinka, kaas oo difaaca in cuduro badan oo maanta dhaca ay u sabab yihiin cunto xumo iyo heerarka sare ee aashitada taasi waa jirka. Sidan oo kale, qorshahan miisaanka luminta wuxuu kugula talinayaa cunista taxane ah cuntooyin leh heer sare oo alkaliin ah, kaas oo gacan ka geysanaya yareynta heerka aashitada ay soo saaraan cuntooyinka kale.
1 Heerka pH ee jirka
2 Cunnooyinka alkalka
3 Cuntooyinka aashitada leh
4 Faa'iidooyinka cuntada ka samaysan alkaline
5 Faa’iido darrooyinka ku jira cuntada ka samaysan alkaline
6 Tilmaamaha iyo tilmaamaha markaad bilaabeysid cuntada alkaliin
7 Waxyaabaha kale ee ka caawiya isu dheelitirka pH-ka dhiigga
Heerka pH ee jirka
Heerka pH waxaa loo isticmaalaa in lagu cabiro sida aashitada jirka u yahay. Ku heerka pH caadiga ah ee dhiiga waa qiyaastii 7,5. Cunto wanaagsan ayaa lagama maarmaan u ah in la helo heerarka pH oo wanaagsan sidaa darteedna looga fogaado muuqaalka cudurada kala duwan. Cuntada alkaline waxay raadineysaa in pH dhiigga ku jira uu kufilan yahay wuxuuna u balan qaadayaa miisaan lumiskan, caafimaadka lafaha oo wanaagsan iyo ka hortaga cudurada kala duwan ee ay keento aashitada badan.
Kuwa loo yaqaan cuntooyinka alkaline waa hodanka ku ah macdanta sida sodium, calcium, potassium iyo magnesium. Cuntada alkaline waxay u ololeysaa cunno isku dheelitiran oo ku saleysan cuntooyinkan taxanaha ah. Sidan oo kale waa inaad ku dartaa cuntadaada maalinlaha ah miraha iyo khudaarta sida broccoli, asparagus, zucchini, yaanyo, ama avokado. Mana waayi karaan nuts sida lowska ama yicibta iyo digiraha sida chickpeas ama misir.
Cuntooyinka aashitada leh
Isticmaalka cuntooyinka aashitada leh ayaa lagama maarmaan u ah in lagu gaaro heerka pH wanaagsan ee dhiiga. Waxay hodan ku yihiin macdanta sida fosfooraska, birta iyo iodine waxaana laga heli karaa hilibka casin cuntada badda, gudaha waxyaabaha caanaha laga sameeyo ama sonkor la safeeyey.
Faa'iidooyinka cuntada ka samaysan alkaline
Waa cunto in waxay dhiirigelisaa cunista caafimaadka leh iyada oo ku saleysan cuntooyinka sida nafaqada leh sida miraha, khudradda ama lowska. Tan waxaa u dheer, waxay mamnuucaysaa qaadashada dufanka, aalkolada ama sonkorta.
Raac noocan qorshaha miisaanka luminta ayaa ka caawin doonta qofka inuu daadiyo rodol dheeri ah hab caafimaad leh oo gebi ahaanba waxtar leh. Dhinaceeda, isticmaalka cuntooyinka aashitada iyo alkaline-ka waxay sidoo kale gacan ka geystaan ​​dhimista miisaanka hab aad u tiro badan.
Faa'iidooyinka kale ee cuntada alkaline-ka ayaa ah ka hortagga cudurada suuragalka ah sida arthritis, waxay kordhisaa tamarta jirka ama waxay caawisaa yareynta heerka walaaca qofka.
Faa’iido darrooyinka ku jira cuntada ka samaysan alkaline
Sida cuntooyinka badankood, kahor intaadan bilaabin cuntada alkaliin waxaa lagugula talinayaa inaad u tagto nafaqeeye si loo qiimeeyo inay tahay xukun mudan in la raaco mise waxay ka wanaagsan tahay in lagu bilaabo nooc kale oo cunto ah. Dhakhtarka waxaad u baahan doontaa inaad sameyso baaritaano si aad u hubiso heerkaaga pH ee dhiiga ku jira oo ogow haddii aad u baahan tahay qaadashada cuntooyinka aashitada iyo alkaliinka ku jira. Haddii ay dhacdo inaad sonkorow qabto, laguuguma talin inaad raacdo cuntada noocan ah maadaama ay si dhab ah wax uga beddeli karto caafimaadkaaga.
Tilmaamaha iyo tilmaamaha markaad bilaabeysid cuntada alkaliin
Kuwa difaaca cuntada alkaliinka, waxay dhiirrigeliyaan in dheelitirka pH-ka uu xasuusta aad u wanaajiyo, taas jidhku wuxuu leeyahay tamar badan iyo in tayada hurdada ayaa aad uga sarreysa. Si kastaba ha noqotee, waa nooc cunto ah oo aadan kaligaa bilaabi karin maxaa yeelay waxaa lagugula talinayaa inaad marka hore aado khabiir ku takhasusay nafaqada oo dib kuufiirin doona oo kuu sheegi doona inay mudan tahay bilaabista cuntadan
Marka xigta waxaan ku siinayaa tusaale waxa noqon kara liiska maalinlaha ah ee cuntada alkaline-ka si aad u ogaato oo aad u abuuri karto liiskaaga gaarka ah.
Waqtiga quraacda waxaad dooran kartaa inaad yeelato a casiir laga sameeyay khudaarta iyo miraha.
Subaxda dhexe waxaad ku haysan kartaa dhowr koob oo biyo ah gabal miro ah.
Waqtiga qadada waxaad sameyn kartaa saxan khudradda cagaaran. Waad isku dari kartaa saxankan qaar dalag ah ama digiraha qaarkood maadaama ay kugu habboon tahay inaad qaadato borotiinno asal ahaan ka soo jeeda khudradda.
Cunto fudud waxaad heli kartaa faleebo ama gabal miro ah.
Sida cashada, waxaa ugu fiican in la doorto kaloriin hooseeya iyo saxamada fudud sida khudradda la shiilay ama boorash leh miro qaar.
Waxyaabaha kale ee ka caawiya isu dheelitirka pH-ka dhiigga
Marka laga reebo cuntada alkaline-ka waxaa jira waxyaabo kale oo taxane ah oo kaa caawin kara inaad isku dheelitirto pH-ga dhiigga oo aad ka fogaato dhibaatooyinka caafimaad ee mustaqbalka.
Wax yar ka samee jimicsi joogto ah Waxay ka caawineysaa dheef-shiid kiimikaadka inuu si joogto ah u shaqeeyo oo sidan oo kale ah wuxuu baabiin karaa nijaasta iyo sunta jirka ku jirta taas oo u horseedi karta pH inay kor u kacdo.
Waa muhiim in jirka la nadiifiyo waqti ka waqti. Si tan loo sameeyo, marka lagu daro biyo la cabbo waad sameyn kartaa cabitaannada nooca dura kuwaas oo ka caawiya nadiifinta jirka gudihiisa iyo baabi'inta sunta.
Haddii aad rabto inaad yeelato isku dheelitirnaan jidhka ah waa muhiim inaad adiguna hesho a dheelitirka heerka shucuurta. Haddii aad maamusho inaad mideyso maskaxda iyo jirka maheysid wax dhibaato ah oo aashitada jirka ah oo sababi karta dhibaatooyin mustaqbalka.
Sida aad u arki karto, cuntada alkaline looma tixgelin karo inay tahay cunto mucjiso ah maadaama aadan raadineynin culeys xad dhaaf ah waqtiga ugu yar ee suuragalka ah. Sidoo kale lama caddeynin inay saameyn ku laabaneyso qofka go'aansada inuu raaco. Si kastaba xaalku ha ahaadee, sida had iyo jeer dhacda marka la bilaabayo cunno gaar ah, waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato khabiir kugula talin doona haddii ay mudan tahay in la raaco iyo in kale.
Kadib waxaan kaaga tegayaa muuqaal sharaxaad leh si ay kuugu cadaato waa maxay cuntada alkaline ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Nafaqeyn » Alimentos » Cunnada xasaasiyadeed
Sidee si dabiici ah loogu kordhiyaa ferritin?
Waa maxay sababta mararka qaar aysan suurta gal u ahayn in dufanka caloosha lagu baabi’iyo iyadoo la ordayo?